Qတဲ့သူနှင့် ချစ်တဲ့သူရဲ့ ခြားနားချက်များ – Trend.com.mm
တကယ်လို့ သင်သာ တစ်ယောက်ယောက်ကို ချစ်ခဲ့ဖူးတယ် သို့မဟုတ် ချစ်ခံခဲ့ ရဖူးတယ်ဆိုရင်တော့ ဒီစာတွေဟာသိပ်ကိုမှန်ကန်တယ်လို့ ခံစားရပါလိမ့်မယ်။ မြန်ဆန်လွန်းတဲ့ အင်တာနက်ခေတ်မှာ Q သောသူ နှင့် ချစ်သောသူကို ကွဲကွဲပြားပြား သိဖို့အတွက် Qတဲ့သူနဲ့ ချစ်တဲ့သူရဲ့ ကွဲပြားခြားနားချက်တွေကို Trend ပရိသတ်ကြီးအတွက် ဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ်။
ချစ်သောသူ – သင့်ကို ညသိပ်မနက်ဖို့ပြောလိမ့်မယ်။
Q သောသူ – သူကမင်းကို လုပ်စရာရှိတာမလုပ်ခိုင်းဘဲ သွားလည်ဖို့ခေါ်လေ့ရှိတယ်။
ချစ်သောသူ – သူကမင်းကို အလုပ်ကောင်းကောင်းလုပ် ဖို့လောဆော်နေလိမ့်မယ်။
Q သောသူ – မင်းနေမကောင်းချိန်မှာ၊ နားဝင်ချိုတဲ့စကားတွေပြောပြီး မင်းကိုဂရုစိုက်ပြလိမ့်မယ်။
ချစ်သောသူ – မင်းနေမကောင်းချိန်မှာ၊ သူ့ဂရုစိုက်မှုတွေက စိတ်ရှုပ်လောက်အောင်ကို ရှိပြီး ဆရာဝန်ဆီ အတင်းသွားကြည့်ခိုင်းတတ်တယ်။
Q သောသူ – သူကမင်းကို စကားအကောင်းတွေပြောပြီး မင်းရဲ.နှစ်သက်မှုကိုရယူဖို့ ကြိုးစားလေ့ရှိတယ်၊ မင်းကလဲဒါကိုဘဲ မွေ့လျော်နေတတ်တယ်။
ချစ်သောသူ – သူပြောသမျှစကားတွေက မင်းကိုဂရုစိုက်တဲ့စကားတွေဖြစ်ပြီး အများအားဖြင့် မင်းကို အမိန့်ပေးတာမျိုးနဲ့ပြောလေ့ရှိတယ်။
Q သောသူ – သူကမင်း အလိုကိုလိုက်တတ်ပြီး မင်းပျော်နေရင်ရပြီ။
ချစ်သောသူ – သူကမင်းကို အမှားအမှန်တွေ ခွဲခြားပြတတ်ပြီး မင်းကတော့သူ့ကို တော်တော်လျှာရှည်တတ်သူလို့ သတ်မှတ်တတ်တယ်။
Q သောသူ – သူက မင်းရဲ. လှုပ်ရှားမှု အသေးစိတ်ကို သတိထားလိမ့်မယ်၊ မင်းမှားတာလုပ်မိရင်တောင် မင်းကို ထောက်ပြမှာမဟုတ်ဘူး။
ချစ်သောသူ – သူက မင်းရဲ. လုပ်ပုံကိုင်ပုံ ကို သတိထားပြီးဘယ်နေရာမှာ မှားနေလဲဆိုတာကို ထောက်ပြလိမ့်မယ်။ ဘယ်နေရာမှာ ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်၊ ဘယ်လိုလူတွေနဲ့ဆက်ဆံရမှာကို ပြောပြလေ့ရှိတယ်။
Q သောသူ – သူကအခုချိန်ကိုပဲစဉ်းစားတယ်။
ချစ်သောသူ – သူကရှေ့ရေးကိုတောင်မျှော်မှန်းနေပြီး မင်းစိတ်ချမ်းသာအောင် ဘယ်လိုကြိုးစားရမလဲဆိုတာကို တွေးခေါ်တတ်တယ်။
တကယျလို့ သငျသာ တဈယောကျယောကျကို ခဈြခဲ့ဖူးတယျ သို့မဟုတျ ခဈြခံခဲ့ ရဖူးတယျဆိုရငျတော့ ဒီစာတှဟောသိပျကိုမှနျကနျတယျလို့ ခံစားရပါလိမျ့မယျ။ မွနျဆနျလှနျးတဲ့ အငျတာနကျခတျေမှာ Q သောသူ နှငျ့ ခဈြသောသူကို ကှဲကှဲပွားပွား သိဖို့အတှကျ Qတဲ့သူနဲ့ ခဈြတဲ့သူရဲ့ ကှဲပွားခွားနားခကျြတှကေို Trend ပရိသတျကွီးအတှကျ ဝမြှေပေးလိုကျပါတယျ။
ခဈြသောသူ – သငျ့ကို ညသိပျမနကျဖို့ပွောလိမျ့မယျ။
Q သောသူ – သူကမငျးကို လုပျစရာရှိတာမလုပျခိုငျးဘဲ သှားလညျဖို့ချေါလရှေိ့တယျ။
ခဈြသောသူ – သူကမငျးကို အလုပျကောငျးကောငျးလုပျ ဖို့လောဆျောနလေိမျ့မယျ။
Q သောသူ – မငျးနမေကောငျးခြိနျမှာ၊ နားဝငျခြိုတဲ့စကားတှပွေောပွီး မငျးကိုဂရုစိုကျပွလိမျ့မယျ။
ခဈြသောသူ – မငျးနမေကောငျးခြိနျမှာ၊ သူ့ဂရုစိုကျမှုတှကေ စိတျရှုပျလောကျအောငျကို ရှိပွီး ဆရာဝနျဆီ အတငျးသှားကွညျ့ခိုငျးတတျတယျ။
Q သောသူ – သူကမငျးကို စကားအကောငျးတှပွေောပွီး မငျးရဲ.နှဈသကျမှုကိုရယူဖို့ ကွိုးစားလရှေိ့တယျ၊ မငျးကလဲဒါကိုဘဲ မှလြေ့ျောနတေတျတယျ။
ခဈြသောသူ – သူပွောသမြှစကားတှကေ မငျးကိုဂရုစိုကျတဲ့စကားတှဖွေဈပွီး အမြားအားဖွငျ့ မငျးကို အမိနျ့ပေးတာမြိုးနဲ့ပွောလရှေိ့တယျ။
Q သောသူ – သူကမငျး အလိုကိုလိုကျတတျပွီး မငျးပြျောနရေငျရပွီ။
ခဈြသောသူ – သူကမငျးကို အမှားအမှနျတှေ ခှဲခွားပွတတျပွီး မငျးကတော့သူ့ကို တျောတျောလြှာရှညျတတျသူလို့ သတျမှတျတတျတယျ။
Q သောသူ – သူက မငျးရဲ. လှုပျရှားမှု အသေးစိတျကို သတိထားလိမျ့မယျ၊ မငျးမှားတာလုပျမိရငျတောငျ မငျးကို ထောကျပွမှာမဟုတျဘူး။
ခဈြသောသူ – သူက မငျးရဲ. လုပျပုံကိုငျပုံ ကို သတိထားပွီးဘယျနရောမှာ မှားနလေဲဆိုတာကို ထောကျပွလိမျ့မယျ။ ဘယျနရောမှာ ဘယျလိုလုပျရမယျ၊ ဘယျလိုလူတှနေဲ့ဆကျဆံရမှာကို ပွောပွလရှေိ့တယျ။
Q သောသူ – သူကအခုခြိနျကိုပဲစဉျးစားတယျ။
ခဈြသောသူ – သူကရှရေ့ေးကိုတောငျမြှျောမှနျးနပွေီး မငျးစိတျခမျြးသာအောငျ ဘယျလိုကွိုးစားရမလဲဆိုတာကို တှေးချေါတတျတယျ။